खानामा विविधिकरणको महत्व तथा फाइदाहरु के-के छन्? यस्तो भन्नुहुन्छ,स्वास्थ्यकर्मी रोशन मगर(नागरिकको जिज्ञाशा सहित)
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०१:५०:५४ युनिकोड
सोमबार, भदौ २१, २०७८ Dhading Sanchar
रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा(गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधिकरणको महत्व तथा फाइदाहरु) गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको खानामा विविधिकरणको महत्व तथा फाइदाहरुका विषयमा धादिङको सुनौलाबजार स्वास्थ्य चौकीमा ईञ्चार्जका रुपमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट रोशन आले मगर संग अनिल नेपालीले गर्नुभएको कुराकानी :
१. खानाको विविधिकरणको भनेको के हो ?
हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने चार किसिमको खानेकुरा जसलाई हामीले दैनिक रुपमा मिलाएर खान सक्छौँ।ति खानेकुराहरुबाट पौष्टिक तत्वको रुपमा पाउन सक्ने सन्तुलित भोजन भन्छौँ।ति खानेकुराहरुलाई खानामा विविधिकरण भएको मान्न सक्छौँ ।
२. फलफुल तरकारी, गाढा हरिया रङका तरकारी र पशुजन्य समुहका खानेकुराहरु के कसरी मिलाएर खान सकिन्छ ?
पहिलो कुरा हामीले शक्ति दिने खानाका रुपमा अन्न तथा कन्दमुल प्रयोग गर्छौ । अन्न तथा कन्दमुलबाट शक्ति तथा कार्वोहाइडे«ट गर्ने भएको कारणले दैनिक रुपमा चामल, कोदो, गहुँ, फापर कुनै एक चिज मिलाएर खान सक्छौँ भने गेडागुडीबाट प्रोटिन प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसले शरीरको बृद्धि विकास गर्नको लागि मद्धत गर्दछ ।
गेडागुडी मिलाएर खानामा एक चिज खान सक्यौ भने हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्छ। साथै दुधजन्य र पशुपन्छीजन्य खानाबाट दुध, दही, घ्यु,पनिर जस्ता खानेकुराहरुबाट एक चिज लिन सक्यौँ भने बृद्धि विकास सँगसँगै हाम्रो शरीरलाइ आवश्यक पर्ने शक्ति प्रदानको लागि त्यो खानेकुरा खान सक्छौँ ।भिटामीन ए तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जसले हाम्रो शरीरलाइ विभिन्न रोगसँग लड्न मद्धत गर्दछ।
हरियो सागपात लगायत पहेँलो फलफुलहरु मिलाएर एक खान सक्यौ भने हाम्रो शरीरलाई फाईदा गर्छ । यी चार किसिमका खानेकुराहरुबाट हामी दैनिक खानाको रुपमा एक/एक मिलाएर खानसक्यौँ भने गर्भवती र गर्भवस्थाका महिलाहरुलाई अत्यन्त महत्वपुर्ण रुपमा मानिन्छ।
देवकी गुरुङ,धादिङ – श्रिमान श्रिमतीले शारीरीक सम्बन्ध राखेपछि पुरुषमा हुने बच्चा बस्ने प्रक्रिय बाहिर स्खलन गर्दा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ? शारीरीक सम्बन्ध राख्दा पुरुषको रगत आउनु राम्रो कि नराम्रो ?
शारीरीक सम्बन्ध राख्दा पुरुषले बाहिर स्खलन गर्दा सुरक्षित तवरले गर्न सकिन्छ भने ठिक छ । सुरक्षित तरिकाले गर्न सकिएन भने कहिले काँही गर्भ बस्ने खतरा हुन्छ । कुनै परिवार नियोजनका साधनहरु प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु । शारीरीक सम्बन्ध राख्दा पुरुषको रगत आउनु नराम्रो कुरो हो । के कारणले आयो भन्ने कारण पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ । धादिङ अस्पतालमा आएर जाँच गर्नुहोस् ।
३. यो चार समुहका खानेकुराहरु हरेक बार गर्भवतीले साविकमा खाइरहेको भन्दा कति पटक बढी र सुत्केरीले कति पटक बढि खानुपर्छ ? र किन खानुपर्छ ?
गर्भवती महिलाले दिनमा साविकको मात्रा भन्दा थप एक पटक खानुपर्छ । र सुत्केरी महिलाले दिनमा साविकको भन्दा थप २ पटक खाना खान जरुरी हुन्छ। किनभने गर्भवतीको अवस्थामा आवश्यक मात्रामा पोषिलो खाना खानाले गर्भमा रहेको बच्चाको दिनमा ३० प्रतिशतले विकास हुन्छ। आमाले खाएको खाना नै बच्चाले खान पाउँछ र राम्रो बृद्धि विकास हुन्छ।
आमाको शरीर स्वस्थ भइ स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि मद्धत गर्दछ। अब सुत्केरी अवस्थामा दुई पटक खान जरुरी छ किनभने सुत्केरी महिलाले स्तनपान गराउनु पर्छ। सुत्केरी महिलाले ६ महिनासम्म आफनो बच्चालाई स्तनपान गराउन पर्ने भएको कारणले सम्पुर्ण आहार दुधबाट पाउने हुँदा आमाले प्रशस्त मात्रामा पोसिलो खानेकुरा खानुपर्दछ।
पोसिलो खाना खानाले गर्भवती तथा सुत्केरीबाट साविको अवस्थामा फर्कन सहयोग गर्दछ । त्यो कारणले सुत्केरी अवस्थामा साविकको २ पटक खानु पर्दछ । जन्मेको दुई वर्ष बच्चाको दिमाग ८० प्रतिशत विकास हुने भएकोले ६ महिना पुरा भएदेखि थप पोसिलो खानाका साथै २ वर्षसम्म आमाको दुध मात्र खुवाउनु पर्दछ ।
४. गर्भवती अवस्था कुबिन्डो, मेवा, फर्सी, मह आदि खाँदा गर्भ तुहिन्छ भन्ने धारणा छ यस्को वास्तविकता के हो ?
गर्भवती अवस्था कुबिन्डो, मेवा, फर्सी मह आदि खाँदा गर्भ तुहिन्छ भन्ने कुराहरु हाम्रो समाजमा रहेको गलत धारणको रुपमा मान्न सकिन्छ। कुबिन्डोबाट हामीले भिटामिन सि प्राप्त गर्न सक्छौँ। मेवा, फर्सीहरुबाट आईरन, भिटामिन ए, फोलिक एसिडहरु प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो खानेकुराहरु खान उपयुक्त हुन्छ तर त्यसमा पाइने तत्वहरुको कारणले गर्दा पहिलो त्रैमासिक अथवा तेस्रो त्रैमासिक मा केहि खानेकुराहरु दिन नहुने हुन सक्छ।
निमा लामा, नुवाकोट – गर्भवती अवस्थामा हुनसक्ने खतराका लक्षणहरु के के हुनसक्छन् ? गर्भवती अवस्थामा र सुत्केरी अवस्था पोषिलो खाना नखाएको खण्डमा हुन सक्ने असरहरु के के होलान् ?
गर्भवती अवस्थामा हुनसक्ने खतराका लक्षणहरु धेरै प्रकारका छन् । एक नम्बर अत्याधिक रुपमा बान्ता हुन हो,पेट दुख्नु, पैतला, गोडा, अनुहारहरु सुनिने, टाउको धेरै दुख्नु, बहोस हुने, कम्पन आउने वा मुर्छा पर्ने, गर्भमा रहेका शिशुहरु बढि वा कम चल्नु, धेरै ज्वरो आउनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु जस्ता लक्षणहरुलाइ गर्भवती अवस्थामा हुनसक्ने खतराका लक्षणहरु भन्न सक्छौ। खानेकुराहरु जसरी हामीले गर्भअवस्थामा मिलाएर खान्छौ त्यसले शरीरलाई कुपोषण हुन बाट बचाउन मद्धत गर्छ। गर्भमा रहेका शिशुहरुलाइ बृद्धि विकास गर्न महत्वपुर्ण रहेकाले चार किसिमका खानेकुरा मिलाएर खानको लागि सुझाव दिन चाहन्छु।
५. अण्डा मासु जस्ता पशुपन्छीजन्य खानेकुराहरु खाँदा कब्जियत हुन्छ वा पछि बच्चा जनमाउँदा गाह्रो हुन्छ भन्ने धारणाले गर्दा यस्ता खानेकुरा नखुवाउने गरेको सुनिन्छ नि ?
अण्डा मासु जस्ता पशुपन्छीजन्य खानेकुराहरु खाँदा कब्जियत हुन्छ वा पछि बच्चा जनमाउँदा गाह्रो हुन्छ भन्ने गलत धारणा हो। हरेकबार खाना चार, चार किसिमका खानेकुरा मध्ये अण्डा मासु जस्ता पशुपन्छीजन्य खानेकुराहरु मध्ये एक पर्दछ । हामीले अण्डा लगायत दुध, दही, पनिरबाट अत्याधिक मात्रामा क्याल्सियम तत्वहरु, आइरन फोलिक तत्वहरु पाउँछौ।
जसले गर्दा गर्भ अवस्थामा रहेको शिशुको हडि र मानसिक विकासको लागि महत्वपुर्ण हुुन्छ। त्यसैले कब्जियत हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। माछामासु खाँदा चिल्लो पदार्थको मात्रा बढि भयो भने केहीहदसम्म कब्जियत हुन्छ। अण्डा मासु जस्ता पशुपन्छीजन्य खानेकुराहरु सँगै हरिया सागपातहरु खान सक्यौँ भने कब्जियत हुनबाट बच्न सकिन्छ।
६. दुध, दही, घयु, महि खान नदिने पनि प्रचलन छ । यस प्रकारका पोषिलो खानेकुरा खुवाउने हैन र ?
दुध, दही, घयु, महिबाट हामीले क्याल्सियम, आईरन फोलिक एसिडहरु पाउँछौ। क्याल्सियमले शिशुको हडि र मानसिक विकास गर्न मद्धत गर्ने भएकोले दुधजन्य पदार्थले फाइदा गर्छ त्यसैले गर्भअवस्थामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ। र प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
७. सुत्केरी अवस्थामा चिसो लाग्छ भनेर हरिया सागपात, तथा फलफुल कालो मासको दाल खान नदिने पनि गरिन्छ । यो ठिक हो कि होइन?
गर्भवती अवस्थामा महिलाहरुलाइ हरियो सागपात फलफुलहरु चिसो लाग्छ भनेर गाउँघरमा नदिने प्रचलन पनि छ । हाम्रो गाउँघरको चलन चल्तीले गर्दा गर्भअवस्थामा शिशुलाई बुद्धि विकास गर्नको लागि हरेक बार खान चारमा भिटामिन ए तथा सुक्ष्म पोषक तत्वहरु प्राप्त गर्न सक्छौँ । चिसो लाग्छ भनेर नखुवाउँदा गर्भवती अवस्थामा असर पर्ने हुँदा यी खानेकुराहरु खुवाउन जरुरी छ ।
८.गर्भवती, सुत्केरी र हजार दिने आमाले कुनै खान नहुने खानेकुरा छन् भने स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ।
शिशु गर्भ रहे देखि १२ हप्तासम्मको अवधिलाई पहिलो त्रैमासिक भनिन्छ र २८ हप्ता देखि ४० हप्ताको अवधिलाइ तेस्रो त्रैमासिक रुपले लिन्छौ । पहिलो र तेस्रो त्रैमासिकमा खान नहुने भन्ने चिज छैन । सबै कुराहरु खान हुन्छ तर खानेकुरालाइ नपखालिकन खाने, काँचो खाने गर्नु भएन गर्भवती अवस्थामा काचो मासु, काचो अण्डा उपयुक्त मानिदैन।
फ्याट नभएको अथवा बोसो कम भएको मासुहरु खान उपयुक्त हुन्छ। काचो मेवा र हरियो मेवा खान हुदेन भन्ने कुरा छ। ल्याक्टिस नामक एउटा तत्व पाइन्छ। जसले गर्भशरीरलाइ सङकुचित पार्ने र गर्भ पतन गर्ने समस्या हुन सक्छ,गर्भमा रहेको शिशु लाइ सङ्कुचित बनाइ गर्भपतन गराउन सक्छ। पहिलो त्रैमासिकमा भुइ कटर दिनुहुदैन । करेला पनि गर्भवतकिा लागि सुरक्षित मानिदैन । पहिलो त्रैमासिकमा सकभर नखादा राम्रो हुन्छ। दास्रो त्रैमासिकमा पाकेको मेवालाई पोषकको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यी खानेकुराहरु केही तथ्यमा आधारित छ। सुरक्षित तरीकाले खानेकुरा खान सक्यौँ भने गर्भअवस्थालाई फाइदा जनक हुन्छ।
९. गर्भवती वा सुत्केरी भएको बेलामा पोषिलो खानेकुरा नखुवाउदा के कस्तो बेफाइदा हुन्छ ?
सामान्य शरीरलाई पौष्टिक तत्व नखाँदा कुपोषण हुन्छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न भिटामिन, कार्वोहाइडेट, प्रोटिन तत्वहरु नपाउँदा शारीरीक रुपमा मानसिक रुपमा अगाडि बढ्न सकिदैन भने पक्कै पनि गर्भअवस्थामा पोषिलो खानेकुरा दिन सकेनौँ अथवा हरेकबार खाना चारको चार किसिमका खानेकुरा पाउन सकेन भने गर्भअवस्थामा आमा कुपोषित भयो भने बच्चा पनि कुपोषित हुने गर्दछ। जसले दिर्घकालिन रुपमा असर गर्छ। दिर्घकालिन रुपमा असर पर्ने भएको कारणले हामीले एउटा कुपोषित बच्चाबाट अपेक्षा गर्न सक्दैनौ। गर्भअवस्थामा पोषिलो खानेकुरा खान एकदम जरुरी छ।
१०. अहिले कोरोना महामारीको समयमा गर्भवती र सुत्केरी आमाको निम्ति पोषिलो खानेकुरालाई प्राथमिकतामा राखे परिवारका सदस्यहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्?
कोरोना महामारीको समयमा अहिले तपाई बजार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पैसा भएपनि स्वस्थ, सफा किन्न पाइदैन।हामीले हाम्रो समुदाय स्तरमा चार किसिमका पौष्टिक आहार हरुलाई घरमै कुखुर पालेर, करेसा बारी बनाएर हरिया सागपात, गेडागुडी उत्पादन गर्न सकिन्छ। माछा, मासु सुत्केरी तथा गर्भवस्थालाई पनि आवश्यक पर्ने भयो।
११. खानामा विविधिकरणको कुरा गरीरहँदा हामे घर, घरायासी स्तरमा पाइने पोषिलो खानेकुरालाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर खुवाउन सकिन्छ ?
हाम्रो घरायसी स्तरमा पाइने विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरु चार किसिमका खानेकुराहरु जस्तै अन्न तथा कन्दमुलहरु गाउँघरमा सिविहरु, वोडिहरुलाइ मिलाएर खान सक्यौँ भने हाम्रो शरीरलाइ अथवा गर्भ अवस्थामा रहेको शिशुलाई पनि बृद्धि विकासको लागि मद्धत गर्ने भयो।
अर्को दुधजन्य तथा पशुपन्छी जन्य भनेको हाम्रो घरमै कुखुरा उत्पादन गरेर, दुध, दही उत्पादन गरेर खान सक्यौँ भने फाइदा गर्ने भयो। ती चार किसिमका खानेकुरालाई प्राथमिकताका साथ सबै पर्ने गरी दैनिक रुपमा प्रयोग गर्यो भने गर्भवस्था र सुत्केरी महिलाहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ। गर्भमा रहेको शिशु स्वस्थ तरीकाले जन्मनको लागि मद्धत गर्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २१, २०७८